Bell Sanchar अस्ट्रियाका चान्सलर क्रुजले राजीनामा दिँदै - Bell Sanchar
अस्ट्रियाका चान्सलर क्रुजले राजीनामा दिँदै
एजेन्सी । कम उमेरमा चान्सलर बनेर इतिहास रचेका अस्ट्रियाका युवा सेबास्टियन क्रुजले पदबाट राजीनामा दिने भएका छन् । भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि क्रुजले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन् । युवा नेता क्रुजलाई राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब बढेको थियो ।
देशमा थप उथलपुथल हुन नदिन आफूले पदबाट राजीनामा दिन लागेको ३५ वर्षीय चान्सलरले बताए । उनी सन २०२० को जनबरीमा अस्ट्रियाको चान्सलरमा निर्वाचित भएका थिए । उनी विश्वमै कम उमेरमा चान्सलर बनेका थिए ।
‘हामीलाई स्थिरता आवश्यक छ । अस्ट्रियालाई अस्थिरताको दलदलमा फसाँउनु गैरजिम्मेवार कार्य हो,’ उनले भने । विदेशमन्त्री अलेक्जेन्डर शालेनवर्गलाई नयाँ चान्सलर नियुक्त गर्ने र आफू पिपुल्स पार्टी (ओएभीपी) को नेता रहने क्रुजले बताएका छन् ।
गत शुक्रबार उपचान्सलर तथा ग्रीन नेता वेग्न कोग्नरले क्रुज पदका लागि अयोग्य भन्दै नयाँ चान्सलरका लागि नाम दिन ओएभीपीलाई अनुरोध गरेका थिए । आार्थिक अनिमितता नगरेको र आफूमाथि लागेको सबै आरोप झुट भएको क्रुजले दाबी गरेको बीबीसिले जनाएको छ।
म निवर्तमान मन्त्री भएँ, आफूले आफैँलाई नम्बर दिन चाहन्नँ: श्रेष्ठ
मंगलबार रातिबाट सातै प्रदेशमा भारी वर्षा हुने सम्भावना, सतर्कता अपनाउन अनुरोध
मस्तिष्काघात ः ‘समयमै विशेषज्ञ उपचार पाए पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन सकिन्छ’
सवारी दुर्घटना ः तीनमहिनामा ३४ जनाको मृत्यु
६.	केपी शर्मा ओली ,कुनै देशले आफ्नो भू-भाग चाहियो भन्नु अर्घेल्याइँ होइन
८.	ललितपुरमा पानीपुरी बिक्री गर्न रोक
९.	बस दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, ११ घाइते, सप्तरीमा